XRP (XRP) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) ငွေလဲလှယ်နှုန်း
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 13/12/2019 09:00
XRP ဒေါ်လာစျေးရန် ငွေလဲနှုန်းကယနေ့. ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး converter - ကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအတွက်ယနေ့ငွေလဲနှုန်း။
XRP ဒေါ်လာစျေးရန် ငွေလဲနှုန်းကယနေ့
1 XRP (XRP) တန်းတူ 0.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) တန်းတူ 4.55 XRP (XRP)
ကျနော်တို့တစ်ရက်တစ်ချိန်ကဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှ XRP များ၏ငွေလဲနှုန်းပြောင်းလဲစေ။ ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြငွေလဲနှုန်းလဲလှယ်ကုန်သွယ်၏ရလဒ်များကိုသည်နှင့်အညီယနေ့ 13 ဒီဇင်ဘာလ 2019 များအတွက်တရားဝင်ထူထောင်ငွေလဲနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် အိမ် စျေးကွက်များအတွက်အခြေခံသည်။ အဆင်ပြေသောငွေလဲနှုန်းနှင့်အတူ အိမ် စျေးကွက်ရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ရည်ညွှန်း site ကိုအခမဲ့နှင့်နေ့စဉ် updated ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း XRP တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အရသိရသည် 13/12/2019.
1 XRP သည်ယခုအချိန်တွင် 0.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကို အိမ် ဈေးကွက်တွင်ထားရှိသည်။ 1 XRP ဒီနေ့ဥရောပဥရောပအဓိက အိမ် စျေးကွက်မှာ -0.001033 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ယနေ့ XRP ဥရောပ၌ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဆန့်ကျင်တန်ဖိုးလျော့ကျခဲ့သည်။ 1 XRP ယခု 0.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ အိမ် market ရဲ့နှုန်း။
XRP သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲလှယ်နှုန်း ယနေ့အချိန်တွင် 13 ဒီဇင်ဘာလ 2019
စားပွဲပေါ်မှာမကြာသေးမီနေ့ရက်ကာလအဘို့လဲလှယ်မှုနှုန်းစံတန်ဖိုးများပါရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါသို့မဟုတ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှ XRP များ၏ငွေလဲနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူအကူအညီသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုပါ။ နက်ဖြန်အတွက် XRP မှ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီးခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီးအမြတ်အစွန်းကိုရယူပါ။
13/12/2019 0.219762 -0.001033 ↓
12/12/2019 0.220794 -0.002523 ↓
11/12/2019 0.223317 -0.000609 ↓
10/12/2019 0.223926 -0.005441 ↓
09/12/2019 0.229368 0.002275 ↑
ပွောငျး XRP သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
XRP (XRP) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) စျေးနှုန်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဇယား
XRP (XRP) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) စျေးနှုန်းသမိုင်းဇယား
10 XRP နှုန်း အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယနေ့ဝယ်ဖို့သငျသညျ 2.20 USD ။ ငွေလဲနှုန်းမှာ 50 XRP များ၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည် 10.99 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ 21.98 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 100 XRP မှာ၏ကုန်ကျစရိတ် လက်ရှိငွေလဲနှုန်း။ ငွေလဲနှုန်းမှာ 250 XRP များ၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည် 54.94 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ 1 XRP သည်ယခုအခါ 0.22 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အိမ် စျေးကွက်၏တရားဝင်နှုန်းကို။ 1 XRP ဒီနေ့ -0.001033 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိက အိမ် စျေးကွက်လဲလှယ်နှုန်းမှာကျဆင်းခဲ့တယ်။
2.20 USD 10.99 USD 21.98 USD 54.94 USD 109.88 USD 219.76 USD 549.40 USD 1 098.81 USD
4.55 XRP 1 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ၏ကုန်ကျစရိတ် ယနေ့များအတွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းမှာ။ ငွေလဲနှုန်းမှာ5အမေရိကန်တဒေါ်လာ များ၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည် 22.75 XRP ။ 10 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယခု 45.50 XRP ဖြစ်ကြသည်။ 25 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်းများမှာ 113.76 XRP ။ XRP ငွေလဲနှုန်း အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဆန့်ကျင်ဆင်းကယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ 1 XRP ယခုသင်ငွေထည့်ရန်လိုအပ်သည် 0.22 အိမ် market ၏ငွေလဲနှုန်းအရ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
4.55 XRP 22.75 XRP 45.50 XRP 113.76 XRP 227.52 XRP 455.04 XRP 1 137.60 XRP2275.19 XRP